Luis Suarez Oo Lagu Maadsaday Markii Uu Xalay Ku Eedeeyay Goolhaye Kubad Ka Badbaadiyay Inuu Kubada Gacanta Ku Taabtay - Hoyga Wararka
Home Sports News	Luis Suarez Oo Lagu Maadsaday Markii Uu Xalay Ku Eedeeyay Goolhaye Kubad Ka Badbaadiyay Inuu Kubada Gacanta Ku Taabtay
Luis Suarez ayaa muddo ilbiriqsiyo ah ilaaway in goolhayayaasha loo ogol yahay marka ay ku jireen xerada ganaaxa inay kubada gacanta ku qaban karaan, isagoo ku dooday in goolhayaha xulka Chile inuu kubada gacanta ku taabtay markii uu kubad ka babaadiyay.
Weeraryahanka Barcelona Luis Suarez ayaa damcay inuu kubad ka wareegsado goolhaye Gabriel Arias, laakiin goolhayaha ayaa gacantiisa fidiyay oo kubada ka celiyay inuu isla xerada ganaaxa dhexdeeda ugu baaso xiddig kale oo Uruguay ah.
Suarez oo ilaaway howsha goolhayaha ayaana durbadiiba bilaabay inuu ku dacwoodo in goolhayaha uu kubada gacanta ku taabtay, laakiin markii uu ogaaday qaladkiisa waxa uu durbadiiba bilaabay inuu labada gacmood saarto madaxda.
Taageere ayaa ku soo qoray Twitter: “Hahahaha waa caadadiisa”
“Suarez waa la rumeystaan” ayuu mid kale ku jawaabay.
Mid kale ayaa qortay: “Cabashadiisa badan ayaa sidaan ka keentay”
“Wuxuu ninkaan qaladkiisa ku daboolay isagoo gacmaha madaxa ka kormariyay. Waa caadada Luisito” ayuu mid ku qoslay.
Xiddiga reer Uruguay ayaa lagu yaqaanaa inuu mararka qaar xuduuda ka talaabo marka uu garoomada ku jiro madaama uu xamaasadeysan yahay, wuxuuna leeyahay dabeecad ah inuu si kasta uu ku badin karo ku badiyo.
Waxaa taasi lagu soo arkay mudadii uu ka soo ciyaarayay Ajax, Liverpool iyo haatan uu joogay Barcelona iyo xitaa intii uu u dheelayay Uruguay. Dhowr jeer ayuu ciyaartoy qaniinay, Ghana ayuu kubad uu gacan ku bixiyay kaga reebay Koobk Adduunka, istuurtuur badan ayaa lagu eedeeyay iyo inuu isku dayo inuu daafacyada ka careysiiyo si ay calaamad u qaataan.
Uruguay ayaa xalay u soo baxday wareega sideed dhamaadka Copa America oo ay la ciyaari doonaan xulka Peru.
Gareth Bale ayaa hogaanka qaban doona kulanka Barcelona
Real Madrid ayaa lacag iyo Gareth Bale ku...
james rodriguez oo ka tagaya fc Bayern Mahad...
Frank Lampard ayaa ka hadlay suurtogalnimada halyeeyga Chelsea...
Tababaraha Man City Pep Guardiola ayaan qorsheyneynin inuu...
Daafaca Real Madrid Marcelo aya raba inuu tago...
Ogow 5 Tababare ee ugu Fiican Dunida
4 Xaqiiqooyin oo ku saabsan Cristiano Ronaldo
Waad Noqon Kartaa Sida Cristiano ronaldo iyo Messi